Ururka Kubbadda Cagta ee Ruushka oo loo ganaaxay cunsurinimo - BBC News Somali
Ururka maamula kubbadda cagta ee Ruushka ayaa lagu ganaaxay 22,000 oo gini ka dib markii ay taageereyaashoodu hadallo cunsuriyad ah ku dhaheen kooxdii Faransiiska ee la dheeshay ciyaartii saaxiibtinimo bishii Maarso.
Paul Pogba, Ousmane Dembele iyo N'Golo Kante ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka lagu dhago hadlay markaas oo Faransiisku uu 3-1 kaga badiyay kooxda martigalinaysa Koobka Adduunka.
Ciyaarta ayaa ka dhacday garoonka Krestovsky Stadium ee ku yaalla magaalada St Petersburg oo ka mid ah kuwa martigalin doono Koobka Adduunka.
Lord Herman Ouseley oo gudoomiye u ah ururka la dagaalama cunsuriyadda ee Kick It Out ayaa ganaaxaas lacageed ku tilmaamay mid laga xumaado.
Wuxuu yiri " ururku wuxuu mar kale ku celinayaa in Fifa ay ka maqan tahay qaab shaqaynaya oo uu ku wajaho cunsuriyadda Kubbadda Ruushka, taas oo ay u badan tahay in ay sababi doonto afxumo dheeri ah oo lagula sii kaco ciyaartoyda madaw ee ku lugyeelan doona ciyaaraha dalkaas ka dhici doona.
Joe Gomez: Waan seegi doona cayaaraha horyaalka Yurub
"Markaan tallaabadan aragnay, xaqiiqatan ururka Kick It Out kalsooni yar ayuu ku qabaa in Fifa ay si wanaagsan wax uga qaban doonto falalka cunsurinimada ah ee ay u badan tahay in ay dhacaan Koobka Adduunka ee xagaaga la qaban doono iyo in ay ilaalin doonaan ciyaartoyda, shaqaalaha iyo taagerayaasha madawga ah.
War qoraal ah oo ka soo baxay ururka maamula kubbadda adduunka ee Fifa ayaa lagu sheegay "in habayaraatee" uusan u dulqaadanaynin faquuqa.